Baiboly isan'andro ho an'ny anio 2 Novambra 2018 | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Drafitra famakiana Baiboly Baiboly isan'andro ho an'ny anio 2 Novambra 2018
Ny famakiantsika ny Baiboly isan'andro ho an'ny anio dia avy amin'ny bokin'ny 2 tantara 26: 1-23, 2 Tantara 27: 1-9, 2 Tantara 28: 1-27. Vakio sy hotahina.
2 Tantara 26: 1-23:
1 Ary ny vahoaka rehetra tamin'ny Joda naka an'i Ozia, izay enina ambin'ny folo taona, ka nampanjaka azy handimby an'i Amazia rainy. 2 Nanorina an'i Elota izy ary namerina azy tany Joda, rehefa lasa nodi-mandry any amin'ny razany ny mpanjaka. 3 Enina ambin'ny folo taona Ozia, fony izy vao nanjaka, ary roa amby dimam-polo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Jekolia, avy any Jerosalema. 4 Ary nanao izay mahitsy eo imason'ny Tompo izy, tahaka izay rehetra nataon'i Amazia rainy. 5 Ary nitady an'Andriamanitra izy tamin'ny andron'i Zakaria, izay manam-pahalalana amin'ny fahitana avy amin'Andriamanitra; ary raha mbola nitady ny Tompo izy, dia nambinin'Andriamanitra. 6 Ary nivoaka izy ka niady tamin'ny Filistina ary nandrava ny mandan'i Gata sy ny mandan'i Jabneh sy ny mandan'i Asdod ary nanangana tanàna manodidina an'i Ashdod sy teo amin'ny Filistina. 7 Ary Andriamanitra nanampy azy hamely ny Filistina sy ny Arabo izay nonina tao Gur-baal ary ny Mehunita. 8 Ary ny Amonita nanome fanomezana ho an'i Ozia; ary ny lazany niely hatrany amin'ny fidin'i Egypta; fa natanjaka tokoa izy. 9 Ary Ozia nanorina tilikambo tany Jerosalema teo amin'ny vavahady an-jorony sy teo amin'ny vavahady mankamin'ny lohasaha sy teo amin'ny fihodinan'ny manda ka nohamafisina 10 Ary nanao tilikambo tany an-efitra koa izy ka nihady lavaka maro; fa nanana omby be izy, na tany amin'ny lemaka, na tany lemaka: mpiompy sy mpamboatra tanim-boaloboka any an-tendrombohitra sy any Karmela, satria tia vady izy. 11 Ary Ozia nanana miaramila mpiady, izay nandeha an-tafika, araka ny isany tamin'ny tenin'i Jeiela mpanoratra ary Maaseia mpanapaka, izay nofehezin'i Hanania, iray amin'ireo kapitenin'ny mpanjaka. 12 Ny tontalin'ireo lohan'ny fianakaviana tamin'ny lehilahy mahery dia enin-jato amby roa arivo. 13 Ary nisy tafika, dia diman-jato amby fito arivo sy telo hetsy, izay niady tamin-kery hamonjy ny mpanjaka hamely ny fahavalo. 14 Ary Ozia namboatra ampinga sy lefona sy satroka sy fiarovan-doha sy tsipìka ary tsipìka hitora-bato azy. 15 Ary nanao fiadiana lehibe tany Jerosalema izy, noforonin'ny olona fetsy, ho ao amin'ny tilikambo sy eo an-tampon-trano, handefasana zana-tsipìka sy vato lehibe. Ary niparitaka lavitra ny anarany; fa namonjy be dia be izy mandra-pahatanjany. 16 Nefa nony efa natanjaka izy, dia niavonavona ny fony nanimba azy, satria nivadika tamin'i Jehovah Andriamaniny izy, ary niditra tao amin'ny tempolin'i Jehovah handoro ditin-kazo manitra eo ambonin'ny alitaran'ny ditin-kazo manitra. 17 Ary Azaria mpisorona nanaraka azy, ary ny mpisorona valo ambin'ny folo, izay niaraka taminy, 18 dia nanohitra an'i Ozia mpanjaka izy ka nanao taminy hoe: Tsy maninona anao Ozia, handoro ditin-kazo manitra ho an'ny Tompo, fa ny mpisorona, zanak'i Arona, izay nohamasinina handoro ditin-kazo manitra; mivoaha amin'ny fitoerana masina; fa efa nanota ianao; ary tsy ho voninahitrao eo amin'ny Tompo Andriamanitra izany. 19 Ary tezitra i Ozia, ary teo am-bavany ny fandoroana ditin-kazo manitra; ary raha tezitra tamin'ny mpisorona izy, dia nipoitra teo amin'ny handriny ny boka teo anoloan'ny mpisorona tao an-tranon'i Jehovah, teo anilan'ny alitaran'ny emboka manitra. 20 Ary i Azaria lehiben'ny mpisorona sy ny mpisorona rehetra dia nijery azy, ka, indro, boka teo amin'ny handriny izy, ka noroahiny hiala teo izy; eny, ny tenany koa dia nivoaka faingana satria ny Tompo no nikapoka azy. 21 Ary Ozia mpanjaka dia boka ambara-pahafatiny ka nitoetra tao an-trano maromaro, satria boka izy; fa i Jotama zanany no niadidy ny tranon'ny mpanjaka ka nitsara ny tompon-tany. 22 Ary ny tantaran'i Ozia sisa, na ny voalohany na ny farany, dia nosoratan'i Isaia mpaminany, zanak'i Amoza,
2 Tantara 27: 1-9:
1 Dimy amby roapolo taona Jotama fony izy vao nanjaka, ary enina ambin'ny folo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Jerosy, zanakavavin'i Zadoka. 2 Ary nanao izay mahitsy eo imason'ny Tompo izy, tahaka izay rehetra nataon'i Ozia rainy; fa izy kosa tsy mba niditra tao amin'ny tempolin'i Jehovah. Ary mbola nanao ratsy ihany ny vahoaka. 3 Izy no nanamboatra ny vavahady avo amin'ny tranon'i Jehovah, ary teo amin'ny mandan'i Ofela no naoriny be. 4 Ary nanorina tanàna tany an-tendrombohitr'i Joda izy, ary tany anaty ala dia naoriny tilikambo sy tilikambo. 5 Niady tamin'ny mpanjakan'ny Amonita izy ka nandresy azy. Ary ny taranak'i Amona nanome azy talenta volafotsy zato sy vary tritika iray alina ary vary orza iray alina. Toy izany no nandoavan'ny taranak'i Amona azy tamin'ny taona faharoa sy fahatelo. 6 Ary dia natanjaka Jotama, satria niomana ny lalany teo anatrehan'i Jehovah Andriamaniny. 7 Ary ny tantaran'i Jotama sisa sy ny adiny rehetra ary ny fanaony, indro, efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny mpanjakan'ny Isiraely sy ny Joda izany. 8 Dimy amby roapolo taona izy raha nanomboka nanjaka, ary enina ambin'ny folo taona no nanjakany tany Jerosalema. 9 Ary Jotama lasa nodi-mandry any amin'ny razany, dia nalevina tao an-Tanànan'i Davida izy; ary Ahaza zanany no nanjaka nandimby azy.
2 Tantara 28: 1-27:
1 Roa-polo taona Ahaza, fony izy vao nanjaka, ary enina ambin'ny folo taona no nanjakany tany Jerosalema; nefa tsy nanao izay mahitsy eo imason'ny Tompo tahaka an'i Davida rainy izy, 2 fa nandeha tamin'ny lalan'ny mpanjaka ary ny Isiraely dia nanao sary an-idina ho an'ny Bala. 3 Ary nandoro ditin-kazo manitra tany amin'ny lohasahan'ny taranak'i Hinoma izy, ary ny zanany nodorany tamin'ny afo, araka ny fahavetavetan'ny firenena izay noroahin'i Jehovah tsy ho eo anoloan'ny Zanak'isiraely. 4 Ary namono zavatra hatao fanatitra izy sady nandoro ditin-kazo manitra teny amin'ny fitoerana avo sy teny amin'ny havoana ary teny ambanin'ny hazo maintso rehetra. 5 Ka dia natolotr'i Jehovah Andriamaniny ho eo an-tànan'ny mpanjakan'i Syria izy; dia namely azy izy ka nitondra babo betsaka, ary nentiny nankany Damaskosy. Ary natolotra teo an-tanan'ny mpanjakan'ny Isiraely koa izy, izay namono azy mafy. 6 Fa Peka, zanak'i Remalia, nahafaty olona roa alina sy iray hetsy tao Joda indray andro, dia lehilahy mahery avokoa; satria nandao ny Tompo Andriamanitra, ny razany izy. 7 Ary Zikry, lehilahy mahery tany Efraima, dia namono an'i Mahaseia, zanaky ny mpanjaka, sy Azrikama, governora tao an-trano, sy Elkana izay akaikin'ny mpanjaka. 8 Ary ny zanak'israely dia nitondra babo, vehivavy, zazalahy sy zazavavy, ka nitondra babo ho azy tany Samaria ary nitondra ny babo tany Samaria. 9 Fa nisy mpaminanin'i Jehovah tao, izay atao hoe Odeda; dia nivoaka teo alohan'ny miaramila izay tonga tany Samaria izy ka nanao taminy hoe: Indro, noho ny fahatezeran'i Jehovah, Andriamanitry ny razanao, dia efa novonjeny izy eo an-tananareo, fa efa namono azy ireo tamin'ny fahatezerana izay miakatra hatramin'ny lanitra izy. 10 Ary ankehitriny ianareo mikasa ny hitandrina ny taranak'i Joda sy Jerosalema ho andevo sy ho ankizivavikely aminareo; nefa moa tsy misy aminareo, manota amin'i Jehovah Andriamanitrareo? 11 Koa henoy aho, ka ampivereno ny babo izay nentinao ho babo amin'ny rahalahinao, fa mirehitra aminareo ny fahatezeran'i Jehovah. 12 Ary ny sasany tamin'ny lohan'ny taranak'i Efraima, Azaria, zanak'i Johanan, Berekia, zanak'i Mesilemota, ary Jizkia, zanak'i Saloma, ary Amasa, zanak'i Hadlai, nitsangana hitsangana hamely azy izay avy tamin'ny ady, 13 hoy izy taminy: Aza mampiditra ny babo eto; fa raha nanota tamin'ny Tompo sahady izahay, dia mbola manampy amin'ny fahotantsika sy ny helokay ihany izahay; fa lehibe ny helokay, ary misy fahatezerana mirehitra amin'ny Isiraely. 14 Ary navelan'ny olona voaaro ny babo sy ny babo teo anoloan'ny mpanapaka sy ny fiangonana rehetra. 15 Ary niainga ny olona izay nantsoina anarana, dia naka ny babo, ary nitafy ny babo rehetra izay nitaingina azy, dia nampitafiana azy sy nanala azy ary nanome azy hihinana sy hisotro ary hanosotra azy, ary nentiny tamin'ny borikiny ny osa rehetra, dia nentiny nankany Jeriko, tanànan'ny hazo rofia ho any amin'ny rahalahiny, dia niverina ho any Samaria izy. 16 Tamin'izany andro izany Ahaza mpanjaka dia naniraka tany amin'ny mpanjakan'i Asyria hanampy azy. 17 Fa niverina ny Edomita ka namely ny Joda ary namabo azy. 18 Ary ny Filistina koa dia nanafika ny tanànan'ny tany ambany sy ny atsimo amin'i Joda ary nahafaka an'i Beti-semesy sy Ajalon sy Gederoth sy Shocho sy ny zana-bohiny ary Timnah sy ny zana-bohiny, Gimzo koa ny zana-bohiny; ary nonina tao izy ireo. 19 Fa Jehovah nampietry ny Joda noho Ahaza, mpanjakan'ny Isiraely; fa nampanjaka an'i Joda izy ary nivadika tamin'i Jehovah. 20 Ary nankany Tilgath-pilneser, mpanjakan'i Asyria izy, dia nampahory azy fa tsy nampahery azy. 21 Fa Ahaza dia naka ampahany tao an-tranon'i Jehovah sy tao an-tranon'ny mpanjaka sy ny an'ny andriana ary natolony ho an'ny mpanjakan'i Asyria, nefa tsy natambatra izy. 22 Ary tamin'ny andro nampahoriany dia mbola nanao fahadisoana tamin'i Jehovah ihany izy. Io Ahaza mpanjaka io. 23 Fa namono zavatra hatao fanatitra ho an'ireo andriamanitr'i Damaskosy, izay namely azy izy, ary hoy izy: Satria ny andriamanitry ny mpanjakan'i Syria no mamonjy azy, dia mamono zavatra hatao fanatitra ho azy aho mba hamonjy ahy. Nefa izy ireo dia aringany sy ny Isiraely rehetra. 24 Ary Ahaza namory ny fanaky ny tranon'Andriamanitra, dia nanapatapaka ny fanaky ny tranon'Andriamanitra, ary nakatony ny varavaran'ny tranon'i Jehovah, ary nanao alitara teny amin'ny valan-jaza rehetra izy. 25 Ary tany amin'ny tanànan'ny Joda rehetra dia nanao fitoerana avo handoro ditin-kazo manitra ho an'ny andriamani-kafa ary nampahatezitra an'i Jehovah, Andriamanitry ny razany. 26 Ary ny tantarany sisa sy ny alehany rehetra, na ny voalohany na ny farany, indro, efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny mpanjakan'ny Joda sy ny Isiraely.
Previous lahatsoratraFamakiana Baiboly isan'andro ho an'ny 1 Novambra 2018
Next lahatsoratraFamakiana Baiboly isan'andro ho an'ny 3 novambra 2018.
Salamo 90 Ny dikan'ny hoe Andininy
FIVAVAKANA HO AN'NY RAY REHETRA RANOMASINA